Siday ku dhacday in sirdoonka UK ay baajin waayeen weerarkii Manchester? - BBC News Somali
Siday ku dhacday in sirdoonka UK ay baajin waayeen weerarkii Manchester?
Muuqaalka wax yar kadib marka uu dhacay qaraxa
Saddex Arimood owgeed, UK kama uu dhicin weerar la mid ah qaraxan ka dhacay Manchester ilaa sannadkii 2005ta:
Qof khibrad leh ayaa fulin kara, wey adag tahay in la fuliyo weerarkan oo kale iyada oo aan caawimo la helin.
Waxaa loo baahan yahay diyaargorow iyo qorsheyn badan, tan oo fursad siin lahayd MI5 iyo Hay'adaha kale in ay wax ogaadaan.
Dad ay ka go'antahay inay u bareeraan fulinta labada qodob ee sare waxay ahaayeen naadir.
Muddo dheer ayey BBC-du qaybta arrimaha guduhu la socotay fal kasta oo la sheegay argagixso oo fulay ama dhicisoobay.
Inta badan kiisaska la geeyay maxkamadda ma ahayn dad loo haystay maleegidda weerar xajmi ahaan u dhigmo kan Manchester.
Inta badan dadku ku hawlan hawlaha 'argaggaxa marka ay bilaabaan in ay qarax sameeyaan ayey ogaadaan in ay adag tahay. Waxa laga yaabaa inay taageero weydiistaan qof markii horaba ay MI5 ku daba jirtay dhaqdhaqaaqiisa oo isna aanba war u hayn in lagu daba jiray.
Sidaas darteed ayay mintidiinta doorbidaan baabuur dad la jiirsiiyo iyo tooriyeyn.
Sannadkii 2014kii nin ayaa qorsheeyey in uu qaado weerar uu isticmaali rabea toorey. Waxaa xigay weerarkii sanadkan ka dhacay Westminster ee London oo isna loo adeegsaday tooreey.
Labo iyo labaatan ku dhimatay qarax ka dhacay Manchester
Booliska oo shaaciyay magaca qofkii ka dambeeyay weerarkii Manchester
Sawirro:Saameeyntii uu reebay weerarka Manchester
Image caption Waa Khaalid Masood oo ka dambeeyay weerarkii Westminster, London
Laakiin iyada oo mindiyaha, baabuurta iyo qoryaha yar yar aynu dhowaan ku aragney weerarada, haddana waxaa jira dad doonaya in ay sameeyaan bambooyin waaweyn oo ay ku qarxiyaan goobaha ay dadka badani isugu yimaadaan sida tan Manchester.
Haddaba su'aasha u taala kooxaha sirdoonku waxay tahay, iyadda oo in la sameeyo qarax weyn loo baahan yahay takhasus badan, siddee ayuu ninkan weerarka geystey u heley waxyaalaha uu isticmaaley iyo takhasusnimadaa?
Saddexdan siyaabood midkood ayaa suurtagal ah:
Waxaa la bary qaabka loo sameeyo.
Isaga ayaa is barey.
Qof kale ayaa u dhiibey qalabka uu qarxiyay.
Farsamo aad looga soo shaqeeyey
Haddii la barey, tani waxa ay farta ku fiiqaysaa in uu ahaa nin kasoo noqdey kooxda isku magacowdey Dowlada Islaamka, ee Siiriya iyo Ciraaq.
kooxdaasi waxay ka dambeysay qaraxyo loo isticmaaley waxyaalaha guryaha lagu dhiso sida biraha, masaabiirta, waxyaalahan waxa lagu arkey goobta qaraxu ka dhacay.
Uma muuqato in uu yahay qof kasoo noqdey Xeryaha Al-Qaciida ee Pakistan ama Afqaananistan, maadaama uu safarku dheer yahay, laakiin wey dhici kartaa.
Image caption Dadkii ku dhaawacmey qaraxa
Si kastaba ha ahaatee waxay ahayd farsamo aad looga soo shaqeeyey oo dadka xagjirka ah lagu yaqaanno.
Waxay u baahan tahay xirfada dhinaca injineernimada ah. Mararka qaarkood wey adag tahay in la qariyo marka qaraxyada la sameynayo. Tusaale ahaan walxihii lagu sameeyey qaraxii loo isticmaaley gaadiidka dadweynaha London 2005 waxaa ku jirey kiimiko oo timaha ka daadisay mid ka mid ah dadkii qaraxa sameynayey. Uumigu ka soo baxayo qarxaasi waxuu markiiba uu dili karaa dhirta agagaarka ka dhaw.
Markaas haddii uu is barey, sidee ayuu isu qariyey?
In ay tani suurta gashay waxay muujineysaa, in ay adag tahay in la ogaado khatar, haddii qofka khatartaas maleegayaa uu keligii yahay, si cilmiyeysan oo qorsheysana isu ilaaliyo.
Ma adka in laga iibsado internetka dokumeentiyo laga barto qaabka loo sameeyo bambaanada. Balse akhristow, ha raadin maxaa yeelay waa dembi, makamadna waa lagugu saari karaa meelaha qaar sida UK. Balse maba jiraan waxyaaba aad muhiim u ah oo aad ka heli karto. Sidaas darteed wey adag tahay in ninka weerarka qaadey uu wakhti badan ka fakarayey oo uu qorsheynayey, tani waxay yareyneysaa fikirka ah in uu keli ahaa.
Tan saddexaad oo suurtagalka ah, misana ah tan malaha ugu daran, waa inuu jiro qof khibrad u leh sameynta walxaha qaraxyada laga sameeyo oo ku sugan gudaha UK. Qof aanay ka war hayn hay'ada sirdoonku, suurtaglna ay tahay inuu dad hor leh u sameynayo bambaanooyin ay adeegsadaan.
Waana midda welwel badan ku hayso hay'adda sirdoonka ee MI5.
Image caption Khuburada Baadhitaanka wada
Xog aad muhiim u ah
Baadi goob ayaa socda, inkastoon la garaneyn cidda la raadinayo, laakiin baaristu si xooggan ayay u socotaa.
Booliisku waxay sheegeen inay garanayaan ninka qaraxa geystey. Waa arrin ugub ah maxaa yeelay booliiska muddo ayey ku qaadatey in ay ogaadaan ciddii ka danbeysey weerarkii London sannadkii 2005ta.
Waxa socda kulamo ay ku leeyihiin Thames House, Xarunta MI5, iyo unugyadooda kala duwan oo ay kaga xaajoonayaan weerarkan iyo cashirada laga baran karo.
Unugyada la dagaalanka argagixisada waxay baarayaan wax kasta oo ay ka ogaan karaan walxihii kasoo haray qaraxan. Waxaana dhici doonto in guryo dheeraad ah la baaro.
Saynisyahanada Unuga Shaybaarka Qaraxyada ee Kent waxay bilaabayaan in ay ururiyaan waxyaalihii kasoo haray walxihii qarxey si ay dib isugu kabaan oo ay u ogaadaan waxa laga sameeyey. Saynisyahanadani waxay baadhitaan ku sameeyeen qaraxyo kasta oo dhacay mudooyinkii dambe.
Baaritaandan ayaa horseedi doono in le helo faahfaahin dheeraad ah oo ay dhici karto in ay ninkii wax qarxiyey ay ku xiriiriyaan kooxo. Bilo ayey qaadaneysaa. Laakiin iminka booliisku waa in ay ogaadaan in uu ninkani keligii qaraxan maleegey iyo in kale.